शहिद भीमदत्त पन्तलाई सम्झंदा | Beautiful Farwest of Nepal
Beautiful Farwest of Nepal
-नरी राम लोहार, को थिए भीम दत्त पन्त ?
नेपाली किसान आन्दोलनका नायक सहिद भीमदत्त पन्त नेपाली किसान आन्दोलनका महान शहिद भीमदत्त पन्त डडेल्धुराको कारीगाउँमा १९८३ मंसिर १० गते जन्मेका भीम दत्त पन्त आमा सरस्वती पन्त र बुवा तारनाथ पन्तका सुपुत्र हुन । उत्तरप्रदेश भारतको सिन्हाईबाट संस्कृत बिषयमा हाईस्कुलसम्मको अध्ययन गरेका पन्तलाई गीता र मार्क्सवादको राम्रो ज्ञान थियो । यसले नै उनमा राजनीतिक स्वभाव बढायो । सामन्ती संस्कारका बिरुद्ध आफ्नै घरबाट बिद्रोह गर्ने ब्यक्ति पनि भीम दत्त पन्त नै थिए ।
अन्याय सामाजिक भेदभाव सहन नसक्ने भीम दत्त पन्तले २००७ सालदेखि आन्दोलनको शुरुवात गरे । त्यस बेला उनलाइ भीम दत्त काँग्रेस भन्ने गरिन्थ्यो । अन्याय गर्नेलाइ दण्ड सजाय दिने हुनाले ठालुहरु डराउँथे । कसैलाइ भीम दत्त पन्तले कारवाही गरेको थाहा पाइएमा फलानोको घरमा काँग्रेस पस्यो भनी गाउँमा सन्देश फैलिन्थ्यो । कसैसित धेरै रिसाएर गाली गर्यो भने तेरो घरमा काँग्रेस पसोस् भन्ने पनि चलन थियो । गरीब दलित जनजाती किशानहरुलाई संगठीत गरि राणा बिरोधी आन्दोलनमा समेत भीमदत्त पन्तको ठूलो भूमिका रह्यो । तर २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काँग्रेसले गरेको ब्यवहार उनलाई मन परेन् । उनले क्रान्ति पुरा भएको छैन भनी राणासित मिलेर बनाएको सरकारको बिरोध गरे । परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट अडान भएका भीमदत्त पन्तले दलित मगर र थारुहरु संगठित गरि मुक्ति सेना गठन गरे । नेपालगाजका गौरीलाल र रुपिसंह दुई जना सेनाका कमान्डर थिए । दक्षिण भारत पाजावका एक जना विद्वान कृष्ण स्वामी एंगर योजनाकार थिए । गर्बु थारु र लवरा थारु मन्त्री थिए । भान्सामा दलितहरुलाई सहभागि गराउन थाले । किशानहरुलाई बेदखल गर्ने उनीहरुको नाममा जाली तमसुख बनाउने श्रमशोषण गर्ने ठालुहरुलाई कारवाही गर्न थाले । उनीहरुलाई दलितको भान्सामा खाना खान लगाउँथे । यस ब्यवहारबाट कुडिएका ठालुहरु उनलाई पागल भन्थे । पछि भीमदत्त आफै पनि ठालुहरुलाई परिचय दिंदा पागल पन्त भन्ने गर्थे । काँग्रेससित बैचारिक भिन्तता आएपछि उनले अभिवादन गर्दा जय नेपाल भन्न छोडेर जय जनता भन्न थाले । केही ठाउँमा जय नेपाल भन्नेलाई कारवाही पनि गरेका थिए । उनले भन्ने गर्थे म अहिले जे गर्दैछु भोली यस्तै हुन्छ । त्यसैले आजैदेखि अन्याय अत्याचार छोड्नुपर्छ । उनको क्रान्ति बिरोध गर्ने र कारवाही गर्नेमा मात्र सिमित थिएन । गरीबहरु संगठित हुनुपर्छ । अन्न खेर फाल्नु हुँदैन । उत्पादन बढाउनुपर्छ । अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । प्रकृति बिग्रने काम गर्नु हुँदैन जस्ता कुरामा पनि सचेतना अभियान चलाएका थिए । कस्तो दुःख भोगे भीमदत्तले ?
क्रान्तिमा लागेकाले भीमदत्त घरको काममा समय दिन सक्दैनथे । गाउँका ठालुहरु सबै बिरोधी थिए । घरको जिम्मेवारी धर्मपत्नि पार्वती पन्तकै हुन्थ्यो । नावालक दुई छोरा थिए । बिरामी पर्दा उपचार गर्न नसकेर ५ वर्षको उमेरमा जेठो र अढाइ वर्षको उमेरमा कान्छो छोराको मृत्यु भयो । त्यस पश्चात पनि घरको प्रवाह नगरी क्रान्तिमै लागि रहे । दुबै छोराको मृत्युपछि पार्वती पन्तको आग्रहमा महता क्षेत्रीको छोरीसित अर्को बिवाह गरे । कान्छी श्रीमतिबाट छोरी जन्मिईन । उनको पनि ७/८ वर्षकै हुँदा मृत्यु भयो । छोरीको मृत्युपछि कान्छि श्रीमतिले अर्को बिवाह गरिन । भीम दत्तका बिरोधी र पारिवारिक समस्या बढ्दै गए तर क्रान्तिबाट बिचलित भएनन । उनले गरीबको पक्षमा बोलेको र दलितको घरमा खाएको कसैलाई पनि मन परेको थिएन । यहीबेला अन्याय बिरुद्ध संगठित भई लड्ने उद्घोषका साथ २००९ बैशाख २ गते डडेल्धुराको घटालथानमा भेला बोलाए । गाउँका ठूला ठालुहरुलाइ अनिवार्य उपस्थित हुन उर्दि जारी गरे । सबैलाई जय दाशको हातको पानी खान लगाए ।
भीम दत्तले गरेको आन्दोलन : गरीबहरुलाई संगठित गर्न भीमदत्त गाउँ भ्रमण गर्न जान्थे । सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमका अधिकाँश जिल्लाहरुमा भ्रमण गर्दा गरीबहरुले नुन समेत खान नपाएको थाहा पाएर नुन आन्दोलनको घोषणा गरे । काचनपुरको ब्रहमदेवमा भएको गोदामबाट गरीबहरुलाइ नुन कपडा बितरण गरे । यस घटनाका दिन गरीबहरुको ठूलो जनमासले भीमदत्त पन्तको स्वागत गरी भीमदत्त पन्त जिन्दावाद भनी नाराबाजी गरे । यहीबेला गड्डाचौकी भन्सारमा उनलाई समातियो र हातखुट्टा बाँधेर नेपालगाज पुर्याइयो । भागेर ज्यान बचाइ काचनपुर आए । धेरै जनालाई महाकालीमा फाले । त्यहाँबाट डडेल्धुरा फर्केर आफ्नो बुवालाई तपाई पनि सामन्त हो भनी घरमा भएका तमसुखहरु च्याते । बिष्टहरुको घरमा भएका तमसुखहरु संकलन गरी बोरीमा हालेर जलाइदिए । मालअड्डामा भएका मूठहरु जलाइ दिए । त्यसपछि बडाहाकिम मोहन बहादुर िसंहलाई हटाएर आफु बडाहाकिम भइ बसे । क्रान्तिमा सहयोग गर्नेहरुलाइ कर्मचारी बनाए । चार महिनासम्म उनले शासन चलाए । 'कि त जोत हलो, कि त छोड थलो- यदि हैन भने अब छैन भलो' भन्ने नाराका साथ जोताहा किसानका पक्षमा वकालत गरे । बेलौरीमा बैक कब्जा गरि त्यहाँबाट लिएको पैसा सेनालाई तलव दिएर बाँकी रहेको मध्ये कमैया र हलियाहरुलाई सहयोग गरे । 'उठ जाग रे नेपाली नवजवान जाग रे । नेपालमा तम म नेपाल देशलाई स्वतन्त्र बनाँउ रे ।' भन्ने उहाँको देशभक्ति गीत प्राथना थियो । 'बम्बै जाने रेलगाडीमा दिल्लीको माल आयो गरीबका दिन अया ठालुको काल आयो ।' उहाँको चर्चित गीत थियो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि भीमदत्त पन्त देशलाई स्वतन्त्र बनाउने । गरीबहरुलाई ठालुहरुको कब्जाबाट मुक्त गराउने अभियान थिए । कसरी भयो भीमदत्तमाथि दमन ? भीमदत्त पन्तले गरीबको पक्षमा गरेको काम नै गाउँका ठालुहरुलाई मन परेको थिएन । त्यसमाथि दलितहरुको घरमा खाना खाने तमसुख जलाउने बेदखली गर्नेलाई कारवाही गर्ने ब्यवहारले उनका बिरोधी बढ्दै गएका थिए । सरकारी अड्डाले उनको बिषयमा झुट्टा रिपोर्ट सरकारलाई पठाउँथे भने ठालुहरु गाउँमै षडयन्त्र गरिरहेका हुन्थे । उनीहरुले भीमदत्तलाई मार्न चन्दा उठाएर सेनाको श्रीनाथ गणलाइ पैसा समेत दिए । सरकारले भीमदत्त पन्तलाई पटक पटक जेल हाल्यो । त्यसबाट पनि भीमदत्त बिचलित नभएपछि मार्ने षडयन्त्र गरि भारतीय सेना समेत बोलायो । भीमदत्त पन्त बेलौरी कब्जा गरि धनगढी कब्जा गर्ने तयारी साथ हिडिरहेका बेला भारतीय सेनाले घेरामा पार्यो । चारैतिर भारतीय सेनाले घेरको र पानी परी हिलो भएकाले भाग्न र प्रतिकार गर्न कठिनाई थियो । त्यस अवस्थामा पनि भीमदत्त त्यहाँबाट बच्न सफल भई केही सेनाका साथ निगाली सहजपुर हुँदै बुडर पुगे । सबैलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्न नसक्दा धेरै सेना मारिए । २०१० साल साउन १७ गते बुडरको गइलेक भन्ने ठाउँमा मगरको घरमा खाना पकाउन गोल हानियो । मलाई पक्राउ गर । गोली नहान भन्दा मानेनन । गाली लागि छटपटाईरहेका बेला भीम दियालले उनको टाउको काटि दिए । टाउको लगेर बडाहाकिम मोहन बहादुर िसंहलाई बुझाईयो । काटेको टाउको बाँसको टुप्पोमा झुण्ड्याई राजद्रोहीलाई यस्तै हुन्छ भन्ने प्रचार गरियो ।
काजकि्रयाका लागि पार्वती पन्त टाउको माग्न जाँदा दिएन । गाउँमा काजकि्रया गर्न बाहुन पाईएन । कि्रया पनि गर्न दिईएन । पानीको नाउलो छुट्याइयो । गौरा अलग गरियो । उनको परिवारलाई मेलापर्व मन्दिर पानीपधेरोबाट बिाचत गरियो । गाउँमा कि्रया गर्न समेत नपाईने भएपछि ४० तोलाको कल्ली २२ रुपयाँ तोला सुन घरमा भएका भाँडाकुँडा बेचेर पार्वती पन्त भीम दत्तका भाइ सिद्धराज पन्त र यदुनाथ पन्तले हरिद्वार गई काजकि्रया गरे । भीम दत्त पन्तले सम्मान पाएनन: बिशेष गरि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहले भीम दत्त पन्तलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएका छन । कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा धेरै पटक सरकार बने । कसैले पनि भीमदत्तलाई औपचारिक रुपमा शहिद घोषणा गर्ने आँट गर्न सकेनन । नेताहरु सडकमा हुँदा गरीबलाई सम्झिने र सिंहदरबार गईसकेपछि ठूलाबडाकै पक्षमा जाने संस्कार भएकै कारणले भीमदत्तलाई पनि बिसे्रका हुन सक्छन अर्कोतिर दलहरुमा आदर्श भन्दा सत्ता साँटगाँठलाई महत्व दिने प्रबृति बढेको र किशानलाई उपेक्षा गर्दै आएकाले पनि भीमदत्त पन्तले सम्मान पाएनन भन्न सकिन्छ । यसो भन्दा भीमदत्तलाई शहिद घोषणा गरेर मात्र सम्मान भएको मान्न सकिदैन । सच्चा सम्मान गरेको तव मानिने छ जव उनले उठाएको सम्बोधन हुनेछ । किशानले जग्गा पाउनेछन । पीछडिएका जाती समुदायले न्याय पाउनेछन । गरीबलाई खाना बास सुरक्षा शिक्षा उपचार र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नु भीमदत्त पन्तलाई सम्मान गर्नु हो ।
Tek Raj AcharyaJuly 6, 2013 at 1:03 AMGreat !!!ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Achham district,apart of Seti zone, with Mangalsen as its headquarters, covers an area of 1,692 sq km (653.3 sq mi) and hasapopulatio...
The former Doti Kingdom included not only Doti district; it was expanded up to Achham, Bajhang, Bajura, Dadeldhura, Baitadi, Kailali, Kanch...
Nainadevi Temple Dhangadhi,Kailali Dhangadhi is the headquarters of Seti Zone that includes far-flung places as Saipal near Tibet. The...
Chainpur is the district headquarters of Bajhang district atadistance of 660 kilometers from Kathmandu. It is one of the beautiful place...
Dehimandau Jaant(religious festival) Baitadi is the district headquarters of Baitadi district atadistance of 849 kilometers from K...
Dhangadi cricket academy is in Sri Lanka at the moment to play with different Sri Lankan cricket academy team.
Sisters pray Yamaraj for the longevity of their brothers and put tika on brother’s foreheads and put garland made out of Marigold on their necks.
Tourism Areas of Far west
Copyright (c) 2012 Beautiful Farwest of Nepal.